Male – Page5– Healthy Life Journal
ဝှေးစေ့ဖြတ်ရောင်းလိုက်ရင် ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ . . .
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ Q. ဒီနေ့ သိရတဲ့သတင်းက ဝှေးစေ့တစ်လုံး ၁၇သိန်း တန်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။ ဘယ်လို ရောင်းရတာပါလဲ။ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက ငွေလိုလို့ ရောင်းချင်လို့ပါတဲ့။ ဝှေးစေ့ဖြတ်လိုက်ရင် ဆေးပညာအရ ဘာဖြစ်နိုင်ပါသလဲ ခင်ဗျ။ Minthit(FB) A. ဝှေးစေ့တစ်လုံး...
သက်ကြီးအမျိုးသားတို့ မမေ့လျော့သင့်သော လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်သည့် ရောဂါများ
၊ ကိုထက် ၊ အသက်ကြီးပြီဖြစ်တာကြောင့် လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါတွေအကြောင်းကို စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ဘယ်အသက်အရွယ်ပဲ ရောက်ရောက် လိင်ကိစ္စအတွက် ကွန်ဒုံးဟာ ကိုယ်ဝန်မရအောင် တားဆီးပေးနိုင်ရုံသာမက လိင်မှတစ်ဆင့်ရောဂါတွေကူးစက်မခံရအောင်လည်း ကာကွယ် ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကို သတိရသင့်ပါတယ်။ – ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူတွေက...
အဆင့် ၂ ရင်သားကင်ဆာအန္တရာယ်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူးယော့ခ်မှ မိုက်ကယ်စင်းဂါးက ဘယ်ဘက်နို့သီးအောက်က အကျိတ်သေးသေးလေးကို လပေါင်းများစွာကြာ ဂရုမပြုဘဲထားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာလက တခြားရောဂါအတွက် ဆရာဝန်နဲ့ပြခဲ့စဉ် စိတ်ကူးပေါက်ကာ အကျိတ်အသေးလေးအကြောင်း မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ အသားစယူစစ်ဆေးမှုခံယူဖို့ တိုက်တွန်းခံခဲ့ရပြီး လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ပြီးနောက်မှာ သူမှာ...
အလုပ်စွဲ အမျိုးသားတို့ အမြဲကျန်းမာနေစေရန်
၊ ကိုမိုး ၊ အလုပ်ကြိုးစားတာက ကောင်းပါတယ်။ အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ အလုပ်ကနေ အခွင့်အလမ်းတွေက တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်မှာ ရလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်ကြိုးစားမှုကြောင့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုမဖြစ်သင့်သလို စိတ်ဖိစီးမှုများပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လွန်းတာလည်း မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အလုပ်လုပ်ချိန် များလွန်းခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေး...
အမျိုးသားတိုင်း ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်သင့်ပြီဖြစ်သည့် လက္ခဏာများ
၊ ကိုမိုး ၊ အမျိုးသားအများစုက ကျန်းမာ ရေးမကောင်း တဲ့ လက္ခဏာတွေ ရှိနေပေမယ့် မသိဟန်ပြုပြီး လျစ် လျူရှူထားတတ်ကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ရောဂါရင့်လာတဲ့ အခြေအနေကျမှ ကုသရခက်ခဲတာမျိုး ဖြစ်လာတတ်တာကြောင့် အခုကစပြီး မသင်္ကာဖွယ်ရာ လက္ခဏာတွေ ပေါ်လာရင် ကျန်းမာရေး...
ဆီးခုံပေါ်က အဆီကျိတ် . . .
မေး. ဆရာ အခုကျွန်တော့်မှာပေါက်နေတာ ငါးမျက်စိပုံစံမျိုးလေးတွေပါ။ ဆီးခုံမှာ ပေါက်နေတာပါ။ ညှစ်ထုတ်ရင် ဝတ်ဆံအဖြူ အခဲလိုက်ထွတ်တယ်ဆရာ။ ညှစ်ပြီးပျောက်တယ်ဆရာ။ နောက်ပြီး အများကြီးတော့ မပေါက်ဘူးဆရာ။ TA (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. အရေပြားမှာဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ မွှေးအိတ်နဲ့ ကပ်လျက်ရှိတတ်တဲ့ အဆီကျိတ်ကလေးတွေကြောင့်လို့...
လိင်တံထိပ် အရေပြား လှီးဖြတ်မထားတဲ့အခါ . . .
မေး။ ။ လိင်တံထိပ် အရေပြား လှီးဖြတ်တာက ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ ကျွန် တော်က လိင်တံထိပ် အရေပြားလှီးဖြတ်တာ မလုပ်ထားပါဘူး။ အဲဒီအတွက် ဘယ်လိုနောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ ဖြစ်တတ်ပါသလဲ၊ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ကျန်းမာရေးမထိခိုက်အောင် ဘယ်လို ဂရုစိုက်သင့်ပါသလဲ...
၊ ကိုထက် ၊ ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အယူအဆအမျိုးမျိုးကို သင်ကြားဖူးမှာပါ။ ဒီလိုကြားဖူးတာတွေက မှန်ကန်မှုရှိရဲ့လားဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ထင်မြင်ချက် (၁)– ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါဟာ အမျိုးသားတွေအသက်ကြီးလာတိုင်း ပုံမှန်ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါပါ။ အမှန် ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါက အသက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပေမယ့် အသက်ကြီးလာတိုင်း ဖြစ်တတ်တဲ့...
အမျိုးသားတို့ ဒေါသထွက်နေချိန် ဆင်ခြင်သင့်သည့် အပြုအမူများ
၊ ကိုမိုး ၊ စိတ်တိုဒေါသထွက်နေချိန်မှာ တချို့အပြုအမူတွေကိုလုပ်ဆောင်လိုက်တာကြောင့် ဘဝတစ်လျှောက်လုံး နောင်တကြီးစွာရရတဲ့အဖြစ်မျိုး ရောက်တတ်သလို တစ်ခါတစ်ရံ အသက်အန္တရာယ်တောင် ထိခိုက်တတ်ပါတယ်။ – စကားအချေအတင်မပြောသင့် ဒေါသထွက်နေချိန်မှာ အငြင်းအခုံလုပ်ပြီး စကားအချေအတင်ပြောတာကြောင့် စကားပြော မှားကာ နောင်တရတတ်ပါတယ်။ ဒေါသထွက်တဲ့အခါ တခြားသူကို နာကျင်စေတဲ့...